जिग्रीपाँडे “भद्रगोल” छोडेर आफ्नै सिरियल बनाउदै रेन्त, मुन्नी र रक्षाको होला जस्तो छ “सक्किगोनि” मा भिडन्त – Nepali News Portal – Trending Nepali News
जिग्रीपाँडे “भद्रगोल” छोडेर…
नेपाली टेलिसिरियलको ईतिहासमा निकै चर्चित हुन सफल कार्यक्रम “भद्रगोल”, अहिले अन्य कलाकारले चलाइरहेका छन्। विभिन्न कारण धेरै पटक “भद्रगोल” बन्द हुँदै र सुरु हुँदै अनि फेरी बन्द भएको थियो। गत हप्ता नयाँ भद्रगोल आएको थियो तर विभिन्न फरक फरक कलाकारहरुको उपस्थितिमा। उक्त सिरियलमा भद्रगोल का सबै मुख्य कलाकारहरुको अनुपस्तिथि देखिन्थ्यो।
नयाँ “भद्रगोल” लाइ अहिले अशोक धिताल अर्थात “बाहुन डन” ले निर्माण गरिरहेका छन् भने नयाँ नयाँ कलाकारहरुको उपस्थिति रहेको छ। बारम्बार मिडिया हब संग पैसाको लेनदेनमा समस्या आइरहेको हुँदा यो समस्या भोग्नु परेको जिग्री पाँडेले मिडिया बताउदै आएका छन्। भद्रगोल छोड्नुको खास समस्या मिडिया हब नै हो भनेर बताउने कुमार कट्टेल “जिग्री” ले तितो सत्य, जिरे खुर्सानी र मेरी बास्सै बाट कलाकार नै निस्केको र सिरियल पनि बन्द भएको उदाहरण दिँदै, हामी पनि मिडिया हब सँग काम गर्न सकेनौ भने।
यता नयाँ सिरियल “सक्किगोनि” को उद्घाटन भएको छ भने प्रोमो सार्वजनिक गर्दै ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलमा प्रचारप्रसारमा निरन्तर लागि परेको देखिन्छ। पछिल्लो भाग को “भद्रगोल” को युट्युब कमेन्ट हेर्दा धेरैले आपत्ति जनाएका थिए र पुरानै कलाकारको माग गर्दै गरेको अनगिन्ति कमेन्ट देख्न सकिन्छ। नयाँ सिरियल “सक्किगोनि” कि एडभरटाइजिङ्ग ले हेरेको छ भने युट्युबमा ओएसआर डिजिटलले अनुमति पाएको छ।
नयाँ सिरियल भए पनि दर्शकले रुचाउनेमा विश्वस्त छन् जिग्री पाँडे टोली। किनभने दर्शकले देखाएको माया भद्रगोल लाइ भन्दा पनि उनीहरुको कलालाइ मन पराएको दाबी गर्छन। “सक्किगोनि” टेलिसिरियलमा भद्रगोल भन्दा धेरै अन्य चिरपरिचित कलाकार पनि समावेश गराइएको छ, जसले गर्दा एकदमै रुचाइने विश्वास सक्किगोनि टिमले लिईएको छ।
ओएसआर डिजिटलले भर्खरै दुइ वटा प्रोमो सार्वजनिक गरेको छ। एउटा प्रोमोमा मुन्नी र रक्षाको के हुनेछ अब भन्ने कुरा प्रोमोमा देख्न सकिन्छ, जिग्रीले कसलाई मन पराउलान त? र अर्को प्रोमोमा अर्जुन घिमिरे “पाँडे” र सिपि पुडासैनी “धतुरे” को घम्साघम्सी परेको देखिन्छ। धतुरे पात्र भद्रगोलको पहिलो एपिसोड देखि नै उपस्थित थियो तर एपिसोड बढ्दै जादा धतुरे ले कार्यक्रम छोडे या छुटाइयो त्यो चाही थाहा भएन तर अब नया सिरियल “सक्किगोनि” मा यी सबै नयाँ पुराना पात्रहरुलाई समावेश गरिनेछ।
प्रश्न यो छ कि, अहिले अशोक धिताल अर्थात “बाहुन डन” ले निर्माण गरिरहेको भद्रगोलमा उनि निर्देशनको पाटो हेरिरहेका छन्, के उनीलाई पनि यो “सक्किगोनि” सिरियलमा देख्न सकिएला त? त्यो त आउदो कार्यक्रममा थाहा हुनेछ।
आउनुस हेरौ “सक्किगोनि” को ट्रेलर